CANAIMA GNU / LINUX: Kungoita Basa Rako Rokumba? | Kubva kuLinux
CANAIMA GNU / LINUX: Kungoita Basa Rako Rokumba?
linuxero | | Kugoverwa, GNU / Linux, Noticias
Nyika ye dKugoverwa kweLinux Iyo yakafara kwazvo, huwandu hukuru hwevanogadzira pasirese vakaita mupiro wakakura uye mumwe nemumwe wavo akaedza kuita nepose pavanogona napo kutipa nharaunda dzakanakisa kufambisa internet uye kushandisa komputa zvisina tsarukano kuti iite mamirioni ekuvhiya kune makuru makomputa. Ichi chikamu chekunaka kweLinux. Zvisinei, zvinofadza kuona apo hurumende nemasangano zvinotsigira mahara software neLinux, sezvazviri muBolivarian Republic yeVenezuela, ine hurumende yakakurudzira zvisikwa Kanaima GNU / Linux, iyo distro yakaitwa muVenezuela.
Maererano ne zviri pamutemo webhusaiti, "Kanaima GNU / Linux iri kuvhura chirongwa chezvemagariro"
Kugoverwa uku kwakagadzirwa kuburikidza nechibvumirano pakati Venezuela y ChiPutukeziIye uye uyo aive nechinangwa chikuru chaive chekugutsa komputa yekudzidzira zvinodiwa muVenezuela; zvakare iri yepamutemo Inoshanda Sisitimu yeiyo laptop inonzi "Kanaimita" yekuparadzirwa kwemahara mumatanho edzidzo yekutanga muVenezuela, uye nekuwedzera kune iyi ndiyo inoshanda yehurongwa hwemasangano eruzhinji muVenezuela. Yakatanga kuvhurwa yemakomputa emakomputa, kunyange hazvo shanduro dzayo dzichangoburwa dzichiratidza kuchinjika kumalaptop uye nhare mbozha.
Kunyangwe kuve nemimba se SO nekuda kwekudzidzisa, izvi hazvingogumira mukushandisa kwayo chete ku "ita homuweki." Kanaima GNU / Linux ine akasiyana siyana anoshanda uye inotsvaga kukwezva vamwe vashandisi kuFree Software.
Kudzidza Linux kubva kupuraimari
Zvino, Kanaima iri zvichibva paDebian Kutenda kune ayo akawanda mabhenefiti uye kutaura pane anowanikwa eKanaima GNU / Linux mapakeji isu tine zvinotevera zviripo mushanduro 4.1, mamwe acho akasarudzika eiyi distro uye akagadzirwa muVenezuela nevaVenezuela programmers.
Cunaguaro 8.0 (Yakazara HTML5 Tsigiro)
Ucumari: Kudzora Center kunobva Ailurus
Kanaima Installer: Nyowani nyowani yakanyorwa muPython
Software Center: Kunyorera Kuisa Center
Zvikumbiro izvozvi zvaiswa nekusarudzika muIO:
Pitivi vhidhiyo mupepeti
Disk yekushandisa kuongorora
Zvishandiso zvekutanga zvekushandisa
Pamusoro pezvo, zvinotevera zvinowedzerwa zvakaitwa:
Kugadziriswazve kwemapaneru kugadzirisa iyo nzvimbo zvinoenderana neNetbook nemapiritsi.
Chitsva chinoonekwa chimiro chePlymouth Starter Loader.
Dependency muti kururamisa kubvisa zvisina basa mapakeji: gnome-core, dmz-cursor-theme, gnome-madingindira, gnome-icon-theme, shanduko, shanduko-yakajairika, epiphany-browser, epiphany-browser-data.
Humwe hunhu hwakanaka hwekuparadzirwa uku ndouku:
1.- Yakazara yakagadzirirwa mu free software.
2.- Zviri chaizvo chokwadi, sezvo Kanaima yakavakirwa paDebian GNU / Linux vhezheni uye inopfuura nemhando yakaoma bvunzo.
3.- Graphical inowanikwa hushamwari uye yakapusa kune vashandisi vasina ruzivo rweLinux.
Kumwe kurambwa kwaonekwa, izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nekushaikwa kweruzivo rwevashandisi kana shanduko inoreva kutama kubva kune imwe sisitimu ichienda kune imwe, havazi vese vashandisi vanofarira kushanda muLinux uye zvinonyanya kuoma kana vasingadaro. uve nechido ichocho kuti uwane mabhenefiti eOS.
Ndokusaka iyo "Welcome Kanaima" application yakanangana nevashandisi vekutanga mukushandisa kweLinux inokwezva kutarisa kwangu. Isu zvakare tine iyo Kudzora Centerl (Ucumari), ichi chishandiso chinogonesa masisitimu ehurongwa asingawanikwe zvakanyanya nemushandisi, achivapa mukana wekuzvishandura sezvavanoda, kuziva hunhu hwehurongwa hwavo (kugona, zvishandiso zvakaiswa, nezvimwewo), kugadzirisa mitemo yekudzivirira; Inovapawo runyorwa rwezvirongwa zvekufarira kuisa, nechikamu chinonzi "Yakagadzirwa muVenezuela" nemashandisirwo akaitwa timu yeCanaima. Kune mamwe mashandisirwo mushanduro 3.1 iyo Orca and the Gok anova mafomu anouya nekutadza kune vanhu vane hurema hwekuona.
Kune avo vanofarira kuyedza Kanaima GNU / Linux uye kushanyira repository, heino kero: Kanaima Official Repository
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » CANAIMA GNU / LINUX: Kungoita Basa Rako Rokumba?
Dambudziko raCanaima rakanga risiri rekushanduka asi nezvekutarisa sezvo distro yakatanga kugadziridzwa nehutongi hweveruzhinji mupfungwa uye ndicho chaive chipingamupinyi chikuru chaive nacho apo CANTV yaisarudza kubva kune rimwe zuva kusvika rinotevera chaizvo, kuti riipe nekukanganisa pamakomputa uye malaptop ayo vakatengesa nehurongwa hwe "ABA internet hwakashongedzwa", ndichiri kurangarira kuti kumashure muna 2010 - 2011 (iyo yaive apo CANTV inoshamisa yakapa Kanaima Linux kuruzhinji) timu yekusimudzira yeCanaima yakaumbwa nevanhu vanosvika gumi uye zviri pachena kuti vaive hauna kugadzirira kukwiza kumushandisi wekupedzisira, mhedzisiro? Zviripachena ini ndinoramba uye kutaura zvazviri ndinorangarira kuti ndaifanira kutama makomputa akati wandei ayo CANTV yakatengeswa neCanaima Linux kuenda kuUbuntu Linux nekuti kuisa Google Chrome semuenzaniso kwaive kwakashinga, nekuti sekutaura kwandamboita pakutanga, iyo distro yaive yakagadzirirwa kushandiswa mune hutongi hweveruzhinji nemvumo. maererano nekuisa mafomu, yakagadzirirwa munzvimbo yambotaurwa.
Nezve Portugal, hazvisi zvekusimudzira kweKanaima pachayo asi nezve canaimitas uye mapiritsi ayo anopiwa mumayunivhesiti, ndokuti, kubatana kuri padanho rehardware, kwete software.
Kwaziso kubva kuCaracas - Venezuela
Kutenda nekujekeswa kwakanaka ...
Kwaziso kubva kuBototá Colombia
Ehe, hazvo ... dai zvisiri izvo zvekuti canaima hainyatso kupa chero chinhu chaicho, zvinogona kutaurwa kuti chiitiko chinoyemurika.
Zvinosuruvarisa, chingori chimiro chezvematongerwo enyika kutaura kuti nyika inofambira mberi tekinoroji, apo nhasi vanhu vashoma vanogona kuisa pamwechete distro yakazara kupfuura Kanaimaima, uye kunyangwe iine mavambo mazhinji (Solus mukutanga kwayo, semuenzaniso).
Kanaima ndizvo zvazviri, anoparadzira ezvematongerwo enyika uye nzira yekushandisa kutendeuka kwezvematongerwo enyika muzvikoro.
Kunze kwezvematongerwo enyika anoparadzira iri distro ine rutsigiro shoma, ini handina kukwanisa kugadzirisa iyo system kunyangwe kamwe, masosi anogara ari pasi.
Ini ndinotenda kuti uyo arikuita zvekutendeutsa vanhu vezvematongerwo enyika ndiwe, uye ino haisi nguva yekutanga. Ini ndinonzwisisa kuti iyi blog inotaura nezveGNU Linux uye kwete nezvematongerwo enyika, unogona kufumura chinzvimbo chako chepfungwa pamasaiti akakumikidzwa kwairi. Mufaro
Shamwari, ndeyekuti kunyangwe hazvo munhu asingade kugoverwa uku kwakabatana nehurumende ... Pamberi [ini handizive izvozvi] zvakanzi nezve canaima "Yakagadzirwa muSocialism"
Haufanire kuvhara zuva nechigunwe, kunyangwe kana iwe uchida kuchiona senge chero GNU / Linux distro, ichave yakabatana nehurumende uye zvimwe zvido ... ndinoda kuona Windows isina Mahara kubva kuMicrosoft [chimwe chinhu. zvisingaite] Ndinoda kuona OS X yakasununguka kubva kuApple [Chinhu chisingaiti] ... Izvo zvinoitika neCanaima ... Uye hachisi chinhu chinondibata nekuti ini handisi wekuVenezuela, asi ini handidi kutora chikamu chero chinhu mune zvematongerwo enyika, kana muhurumende, ndosaka nekungoshandisa kana kuyedza, ndinonzwa kuti ndiri kuenda kunharaunda kana kuti Maduro ari kundisora ​​[Ndinoziva zvinoita kunge kupenga uye kupusa asi ndiwo manzwiro andinoita]
Rakarurama .. ichokwadi chose
Huya shamwari, handifunge kuti nano irikuita zvematongerwo enyika. zvinosuruvarisa kuti ndizvo zvazviri.
Chaizvoizvo maererano newe, zvakafanana zvinoitika munyika, Argentina, manyepo ezvematongerwo enyika uye izvo hazvitungamire chero chinhu chakanaka.
Shamwari, hauzive zvaunazvo.
Munyika yangu havapi chinhu chemahara, ndingafarire kana vakapa vana makomputa neLinux.
Sobe Canaima yakaturikidzana pane debian nemapurogiramu akawedzerwa. saka hazvigone kuve zvakaipa.
Elliot Karoti akadaro
"Nano" anomhanyisa iyi blog anogara achida kukonesa mapurojekiti akanaka kana mazano uye anowanzoita kuti vakodzere sevanonyanyisa, vanopenga kana vakaipa. Richard Stallman anga achitaura pamusoro penjodzi yesoftware yekambani kwemakore mazhinji. Chii chatanga tichidzidza nguva pfupi yadarika? Eya, hapana chimwe uye chakaderera pane chikuru espionage iyo makambani anoita pamwe neUS Chinhu chinosuruvarisa ndechekuti uyu "Nano" anoramba achidana Richard Stallman seanopenga uye anonyanyisa, achiregeredza basa rakakura rinoitwa nemurume uyu pasirese.
Ichokwadi ndechekuti "Nano" mukomana asingazive matauriro ake neruremekedzo. Ndosaka zvisingashamisi kuti yake YouTube chiteshi (mircrokernel asi yakaipa memory) kukundikana kukuru. Ndinovimba uye uyu "Nano" anotarisira iyi blog, anotanga kutora zvinhu zvakakomba nekuti ndicho chinhu chandisina kucherechedza pandakaona vhidhiyo yake, tarisa kuti yakagara sei kweinopfuura awa.
Ndinovimba uye ndinoremekedza chirevo changu uye ndinochiburitsa.
Ini ndinoreva uye ndobvunza vabeki veiyi blog kana vaverengi, Tinoda here GNU-Linux? Zvakanaka, iwe unofanirwa kuzviratidza nekuzvipira, nekuti pakupedzisira GNU-Linux zvese zvinogoverwa, usave vanonyanyisa neumwe chete, ngatitsigire mapurojekiti ese ari maviri 100% yemahara kana kwete akasununguka distros, kungave kubva kuhurumende kana kwete . Kanaima iripo uye iri GNU-Linux. Ndivo here kana kuti havasi ivo GNU-Linux?
Saizvozvowo, ini handisi nyanzvi panyaya iyi, asi nenzira dzangu ndinoshanda kushambadzira yemahara kana yakavhurwa sosi software uye ini handisi kukanzura mapurojekiti nezvikonzero zvinopfuura zvisiri izvo. Ini ndinotaura nezve mabhenefiti makuru eGNU-Linux. Ndinoshuva kuti munyika yangu hurumende yangu yanga isiri chidhiraivhiti cheUnited States uye kuti vanhu vaite zvisarudzo pamwechete nesu. Ndinoda GNU-Linux yakapfeka senge charro neayo tequila xD ajajajjajaja
Ini ndaiziva nezveMexico yeGNU-Linux asi ndanga ndichivatsvaga asi zviri pachena kuti mapeji avo haasisipo. Ini ndaifara kuvatsigira asi ndanga ndiine GNU-Linux kwehafu yegore uye ndanga ndisisakwanise kuvazivisa nezve kuyemura kwangu uye RUVARIDZO.
Ndinoombera Venezuela, kubva kuMexico 😀
Pindura kuna Elliot Carrot
Pamwe kana pachinzvimbo chekugadzira distro yakavakirwa paDebian uye nekutsigira iripo seUbuntu, kana zana muzana mahara, rutsigiro rwungadai rwakakura (Uye ini ndinozvibatanidza ini) Waizviziva here kuti FSF naStallman havatsigire Kanaima uye chokwadi chinobvunza vanhu kuti vasaise? Wanga uchiziva here kuti zvinoitwa naStallman kushora Linux distros pasi rese? Wanga uchiziva here kuti kunyange iyo distro yaunoshandisa - fedora - iri pane yepamutemo FSF uye Stallman mawebhusaiti akaratidzirwa seasinga shande?
Saka kunyangwe iyo FSF kana VaStallman vanotsigira iyo Kanaima distro
Chimwe chinhu, handisati ndamboita zvakanaka ne100% yemahara distros ... Uye kana chishuwo chako chiri chekutsigira GNU naStallman, saka chinhu chekutanga chaunofanira kuita kudzima fedora uye kumisikidza imwe yeiyi distros ... ini ndichataura iwe kuti ndakanganisa makomputa maviri ega kuita danho iri uye ndinofunga kuti kana paine vanhu vanotsoropodza Stallman, saka vane zvikonzero zvekudaro
Shamwari, saka izvo zvaunofanirwa kuita kana iwe uchida kutsigira zvizere mahara software ndeyekudzima Fedora uye kuisa Trisquel kuti usapikise Mr. Stallman uye usashandise chero distro isingazivikanwe neFSF se100% mahara ... iko kushandiswa kwemasocial network, kuwedzera pakusatombobatana neWi-Fi pamusoro peinternet, pakati pezvimwe zvinhu zvinoda software yepamutemo (Hazviite senge zvakanyanyisa here?)
Ini ndanga ndisiri pablog blog kwenguva yakareba, nguva haina kundipa yeizvi.
Zvinoitika kuti ndataura nezvaStallman kuti anonyanyisa nekuti, kutaura zvazviri, iye ... ane chero chinangwa, asi anonyanyisa, uye kunyanyisa hakuna kumbobvira kwakanaka.
Kana iwe hausvike pakuyera kuti Stallman anga akarurama makore ese aya nekuti aive aine hit (hit size, haigone kurambwa), yakapihwa hit haina basa kubva kune mumwe munhu anozvidza mamwe ma distros nekusave izvo zvaari kuda kuti vave.
Nezve Microkernel, kutaura zvazviri sezvo iwe uchiuya nazvo mune imwe yekuyedza kwako kuzviita zvemunhu uye kuwira mune zvakawandisa zvaunondipomera kana uchizvitaura, hazvina kundikundira, kana gonzalo, muchokwadi yakakura ne kutaura kwega kwega uye ini ndakaifarira zvakanyanya mukati memapoka akationa, zvakapera nekuti senge zvimwe zvinhu zvakawanda, nguva haibvumiri chimwe chinhu chinoda kushanda nesimba kwakanyanya.
Kwazisai, ndinovimba unogona kudzidza kutaura zvakaringana nezve vamwe.
Dai yanga isina kubatana nehurumende, ini pachangu ndaizoitsigira nekuisimudzira ... Asi pasi pemamiriro ezvinhu iwayo, handiitsigire, kana kuisimudzira ...
Ini ndinogadzirisa: "Dai iyo yakanga isina kusungirirwa kuhurumende, ini pachangu ndaizoitsigira nekuisimudzira ... Asi pasi pemamiriro ezvinhu iwayo, ini handiitsigire kana kuisimudzira ..."
Mhoroi kwaziso ..
Ini ndinobva kuVenezuela, ini ndoziva nyaya yacho chaizvo
Ndinozvitaura zvakare «Kanaima haina kutungamira kupedzisa vashandisi, kunyangwe vashandisi veyunivhesiti, chaizvo dambudziko necanaima nderekuti harishandisi iro repamutemo reDebian repositori, rakavakirwa hongu, asi rinoshanda nemamwe meta mapakeji ari mukati kubva kune mamwe matura emuno muVenezuela.
Chii icho chine chekuita nechose chinhu? Zvakareruka, kuti kana iwe uchizogadza Google Chrome kana mamwe maapplication anoda kurodha kumwe kutsamira, haigone kuvawana nekuti distro haishandise repositi reDebian, ipapo maapplication anosara asina kukwanisa kuwana zvakataurwa kutsamira, saka inogona kuisa.
Enzaniso dzakadai pane dzakawanda.
Ini ndinofunga kuti Kanaima kana vachizogara paDebian Stable, ivo vanofanirwa kushandisa iyo yekutanga Debian repos nemirazi uye ndokukanganwa nezve zvinyorwa zveVenzuelan.
Icho chinongova chirevo chega
Handina kumbobvira ndaedza canaima, asi kana yakavakirwa padebian uye ine chinongedzo, zvaisazove nyore kuwedzera iyo debian repos ku canaima kana zvirinani kubvisa repositi yeVenzuelia uye kuisa iyo repian yakagadzikana zororo, chimwe chinhu chandakaita kwenguva yakareba yapfuura payakabuda LMDE uye ini ndikachinja repos kuti ndiedze uye zvakandishandira pasina dambudziko, asi kana canaima yakavakirwa padebian, zvakaringana kuchinja iyo sourcel.list, handiti?
Asi ini ndichazivei kana ndikangoshandisa debian.
Pfungwa yekutama nekutsigira kugoverwa kweLinux inoita kunge yakanakisa kwandiri, kune rimwe divi ndichigadzira kugovera, kune zviuru uye zvakanaka kwazvo, zvinoita kuti ndifungisise kuti sei usingangoshandisa debian. Asi zvakadaro Yakareba Rarama Mahara Software.
Dzimwe nguva ini ndakaverenga zvirevo zvakafanana neizvo zvakaitwa pano nezve mahara software nezveCuba uye handigone kuzvinzwisisa.
Dai ini ndaibva kuCuba kana Venezuela, ndaizodada kuti yemahara mashandiro ehurongwa akagadzwa munyika yangu, kunyangwe dai yanga isiri yakanaka sezvainodiwa. Asi ini ndaizorwa kuitira kuti zvive zvakanaka uye zvechokwadi kubva munyika yangu uye kuti vana mukirasi vadzidze nekuivandudza.
Aya ndiwo maonero angu, hongu, uye ini handidi kusvika pavasingandideedze.
Jose Casanova akadaro
Ini 100% ndinotsigira chirevo chako.
Pindura José Casanova
kana ichimhanya asi ichipa zvikanganiso zvakawanda nezvimwe zvirimo. zvakare unofanirwa kuteedzera zvirimo kubva / usr / zvakagovaniswa nekuti haugone kurodha izvo zvemukati kubva kune ayo ekuchengetedza.
Kana rekodhi ikatsva, unodzosa sei iyo diki canaimita kudzoka?
inguva yekuzvienzanisa nekuti hapana imwe nzira
Iyo midzi password, grub ingori muenzaniso, haugone kudzikamisa mwana kana muyaruki uyo atove zvirongwa achiri mudiki zera.
zvakare havasi ivo chete vana kune macanaimas evadzidzisi nevachiri kuyaruka.
zvakanaka chaizvo izvi canaimas une rutsigiro runotyisa zvinyorwa zvavo hazvishande, kana nekuda kwechimwe chinhu iyo grub yakakuvara kana chimwe chinhu chakadai, hauna nzira yekudzosera iyo system sezvo hurumende ichingova nembeu yekudzikonzera kana paita chirwere kana kugadzirisa. uye pane peji rako rewebhu zvinongedzo zvakaputsika
Zvekutaura kana iwe uchida kuisa canaima 4.1 mune canaimita haugone kuisa izvo zvedzidzo zvemukati nekuti zvinyorwa hazvipindirane ...
iyo edzidzo sisitimu inongowirirana neiyo sisitimu kana iwe uchida kuisa izvo zvekudzidzisa zvemukati mune imwe distro iwe yausingakwanise ..
yemahara haina chinhu usape midzi kiyi haitsigire kumwe kugovera .. makiyi anowanikwa neimwe nzira ..
pd nano chikamu chakarurama ... chete avo vanogara pano vanoziva chokwadi
Ndamhanya software yekudzidzisa paDebian. Iwo ari mazhinji mavhidhiyo uye mharidzo dzakatangwa kuburikidza ne .sh script, haimhanye nekuti shanduro dzekare dzecanaima dzakaunza OpenOffice uye shanduro nyowani dzecanaima dzakaunza libreoffice pamwe nedebian nekumwe kugovera.
Mushandisi akajairika, asi kunyangwe mwana wepuraimari, haadi makiyi emidzi, kana zvichidikanwa, unogona kuenda kune nyanzvi anoziva gnu / linux, uyo anogona kushandura iro password password kana aine mukana wepanyama kukomputa uye grub. Chinhu chinogona kuitwa mukanaima, ubuntu, nezvimwe.
Pakusvika pane iyo ye 'República Bolivariana de Chavez… Venezuela' uye isu takarega kuverenga
Pindura kune MyMyselfAndI
Kukanganisa kwako kutaura uye kushandisa njere zvinondisiya ndakakatyamara
Nezve chidzidzo, ndinokuyeuchidza kuti irutsigiro rweMahara Software. Izvo zvakasikwa zvekugovera zvakakura kwazvo, zvimwe zvave zviyero uye zvimwe zvinodzikira munhoroondo, izvo zvasara iLinux uye chinangwa cheboka rega rega.
Chinhu chakakosha kucherechedza ndechekuti nyika dzatoona kuti dzinofanirwa kudzidzisa nekutora vashandi veIT kubva kupuraimari. Vanhu vazhinji havabate munzvimbo ino nekuti havana kumbobvira vaonana nenyaya idzi uye hazvisi zvakavanzika kune chero munhu kuti kune kushomeka kwepasirese kwevashandi veIT.
Kuti kune mataurirwo ezvematongerwo enyika ... "Huku painokandira zai, inokakama." Iyo haisi iyo yakanyanya kunaka distro ... Kune izvo isu tinofarira uye nyanzvi, dzinogona kubatsira.
Zvekare ndinoda kukutenda nekutora chikamu kwako uye kwaziso kuvaVenzuelia!
Alex Ricardo akadaro
Hutsi hwakachena: "yepamutemo mashandiro ehurongwa hweveruzhinji muVenezuela." Ivo vese vanoshandisa pirated Windows kubva kuLanderXtremo. Kanaima yaive danho rakanaka, asi zvinosiririsa yakashandiswa mukutendeutsa vanhu mune zvematongerwo enyika uye haina kumbobvira yatsigirwa sedanho rekutanga kugadzira tekinoroji
Pindura kuna Alex Ricardo
Mangwanani anodikanwa pamwe nevamwe tekinoroji,
Chekutanga pane zvese ndinotenda nekuburitswa kwechinyorwa chino kwavanorumbidza nekureva mabhenefiti eKanaima GNU / Linux sisitimu inoshanda, inoitwa muVenezuela.
Kechipiri, zvakakosha kusimbisa uye kugadzirisa kuti iyo inoshanda yeCanaima GNU / Linux sisitimu yakavakirwa paDebian uye kugovera uku kwakagadziridzwa 100% NAVENEZUELAN TALENT; Iko kushandira pamwe nePortugal kunoreva kuunzwa kwehardware (malaptop) anonzi nesu «Canamitas», akagadziriswa kuti ashande zvakaringana neyedu yeKanaima inoshanda sisitimu uye kuti igovaniswe uye ishandiswe nevana vechikoro.
Ndinokutendai uye nenharaunda yese yeLinux vanoshanyira iyi yakakosha blog.
Shamwari, tarenda harisi 100% yeVenzuelan, iri 100% Debian GNU / Linux ...
Makorokoto, ndinovimba munyika yangu Chile takaita danho rakadai.
Kukanganisa kunotyisa zvakadii kuita zvematongerwo enyika zvinhu, kupfuura zvese zviri munzvimbo yedu yeIT kuita zvematongerwo enyika kugoverwa kweSoftware, Kanaima ine zvayakatadza, ichokwadi timu yeBudiriro idiki uye kutsigirwa kwenharaunda hakusi kwemhando yepamusoro chaizvo . Asi ibasa rakatora kuyedza kukuru tichitarisa kuti iko kugovera kunoenda kuruzhinji runopfuura kubva kune mumwe mushandisi asingade kuisa zvinhu zvakawandisa pc yake kunze kwekushanda, kuvadzidzi uye kubasa hutongi hweveruzhinji, hwandinozviwana ndimo mune imwe yeanonakisa programmers inoshandisa canaima seOS uye kunyaradzwa kwebasa kunyangwe pandinofanira kugara pc yake iri nani pane chero imwe iyo iyo Linux Mint kana Debian 8 inoshandiswa.
Ive nekuchenjerera, ini handisi kurerutsa izvo zvakagoverwa izvo zviri zvemberi kupfuura zveCanaima, zvandiri kureva ndezvekuti kunyangwe paine zvikanganiso iko "kugadzikana" kugovera kune avo vanoziva maitiro ekuibata, kuikoshesa nekuiremekedza sezvazvinofanira kuva, ehe iro moyo murefu unodiwa.
PS: Iyo Hardware yemuchina haifanire kurerutswa futi, zvinogamuchirwa kutaura chokwadi, asi zvakanaka zvirevo zvekuti inogona kumhanyisa mapurogiramu ayo mazhinji masangano maPC aisazogona kutsungirira kunyangwe iri desktop, iyo kunyangwe neniwo ndakatsigira, iyo Pfungwa iyi ndeyekumisa zvematongerwo enyika software uye kutsigira zvinobva munyika medu.
Hector lopez akadaro
Chero zvavanotaura, chirongwa cheSL chakagara chiri chezvematongerwo enyika, kana icho hachina kugadzirirwa kutyora nemasimba makuru anotsvaga kutora ruzivo? Chechipiri, vanhu vanonyepedzera kutaura nezve kutadza kwechirongwa cheCanaima, ndinokukoka iwe pfuura nepakati pezvikoro uye uone kuti ruzhinji rwevakomana nevasikana muVenezuela vanonakidzwa sei necanaimita yavo uye vanodzidza nayo (Ini ndinopa chirevo ichi nezvivakwa zvese, nekuti mwanasikana wangu nemwanakomana wangu vane nguva yega yega munhu paakaratidza pfungwa ye Kuchinjisa kumahwindo ivo vanoenda kunodzivirira canaimita yavo). Inogona kuvandudza? Ehezve inogona kuvandudzwa, chandino chokwadi ndechekuti kuita zvataurwa zvine huturu hazvibatsire kana chirongwa cheCanaima kana kusimudzira kwekushandiswa kwemahara matekinoroji, muVenezuela chete mamirioni mana eKanaimita akaunzwa, ese aine SL, anouya vamwe vanogumbuka (handisi kuti pano isu tine chigumbu) kutaura kuti vazhinji veavo vakatamisirwa kumahwindo, ichokwadi uye akarurama, mubvunzo unenge uri pane zvatiri kuita kudzosera mamiriro iwayo, kunze isu tinonyepedzera? izvo hazviitike? Ini ndinofunga zviri kuyedza kuvhara zuva nechigunwe uye kana iwe usinganditendi, mumwe munhu ndiudze icho chaicho kukura kwehuwandu hwekushandisa kweSL kwave kuri mumakore mashanu apfuura, vazhinji veavo vaporofita venjodzi vanondiudza kuti vangani vanoita une boot mbiri yakaiswa nema windows? vangani vanokurudzira kushandiswa kweSL senzira yekutanga Vazhinji munharaunda vanowana mikoko kuti vazive kuti iko kushushikana kwesoftware kwakapihwa nekuda kwemitemo yehurumende yeBolivarian uye kwete nekuda kwekukodzera kwedu uye icho chinhu chisingarambwe , apo isu Takakurukura nezvezvibvumirano zvakaita sekuti zviri nani kana gnome kana kde Executive yakatora nzvimbo yekumberi nekurudzira neicho chakange chave nekuwiswa, zvinosuwisa kuti vazhinji vakadzivirira pachena pfungwa yekuti mukati mavo vaitenda munhu, havana kumbofunga kuti zvinogona kunyatso mutemo wenyika mukuita. Ini pachangu, ndinobvumirana nekushoropodzwa uye nharo, asi nezviverengero, zvine humbowo hunooneka husingataure nezvevona, nekuti kutaura kuti chisarudzo chakaipa kuburitsa komputa iine rusununguko rwekuparadzira nekutadza kuisa upenzi kutanga kana Mumwe anoti anobva munharaunda, kunyanya kufunga kuti kushoropodza kwakawanda kwandakaverenga hakushandiswi kuchirongwa asi kune kwese kupihwa. Izvo zvinokwanisika kunatsiridza hongu kuti iwe unogona kunatsiridza izvo zvausingakwanise kushoropodza chimwe chinhu sechivaraidzo, kunyanya kana, senge ruzhinji rwevatsoropodzi vanoparadza, ivo vasina kana kumbopa kana kusazombopa chimwe chinhu mukusimudzira kwenzanga.
Pindura Hector Lopez
Daniel N akadaro
Kanaima = NarcoDictadura ine zvigadziriso zvekufambira mberi kwetekinoroji.
Chokwadi = Burda kopi yemahara software, ivo havaite chero chairo mupiro, ivo vanongoteedzera mapurojekiti, ivo vanovapa mazita matsva nemifananidzo mitsva uye ivo vatove vachida kuti zviite sekunge ivo vakaita nhamburiko huru. Ive nekuchenjerera uye kana vasina kugadzirisa software kuti vatisore.
Zvisinei, ini handidi kushandisa canaima.
Pindura kuna Daniel N
Mhinduro yako ndiyo iyo isingape chero chinhu. Mahara software mapurojekiti anogona "kuitirwa" sezvaunotaura pasina dambudziko. ! Ini ndinofunga kuti chirevo chako hachina tarisiro mupfungwa iyi, nekuti canaima haina kugadzirirwa kunyangwe kubva pachigadziko chayo dhizaini yekuzorodza vanhu.
Zvichida kushomeka kwecanaima kune hukama nekuronga ramangwana munzvimbo dzekupinda mukati mehutongi hweveruzhinji! Ndinoomerera kuti chirevo chako hachina tarisiro nekuratidzira chete visceral mafungiro uye pasina hwaro hwehunyanzvi.
Mhoro Linuxero, ndiwe munyori wenyaya ino, urikupaza iri bhurogu nekupfuura zvirevo zvemitemo.
Chero ani anoda kutaura nezvematongerwo enyika anozokura, dolartoday, elnuevoherald nezvimwe ...
Iyi blog iri nezve software uye tekinoroji.
Ini ndinobvumirana zvachose newe Raul.
Nekudaro, kune izvo zvinangwa zveblog uye Mahara Software pachezvayo, isu hatitsvage kudzvanyirira. Kunze kwekunge paine mhosva dzakananga hapana chikonzero chekudzivirira.
Nenzira imwecheteyo, ndinokumbira ruregerero kubva kune avo vashandisi vanoshungurudzwa nenyaya. Hatidi kukanganisa vamwe, kana kukanganisa chinangwa chenzvimbo idzi.
Wese munhu akura zvakakwana kuti atore mutoro wezvaanotaura uye akangwara zvakakwana kuti anzwisise mamiriro ezvakatumirwa uye nezviri mublog.
Ndinokutendai nerutsigiro rwenyu uye nerubatsiro rwenyu kuchengetedza nharaunda ine kuchamhembe kwetekinoroji uye software.
PS: Ndatenda nenzvimbo dzawakangopa kuitira kuti vashandisi vanoshuvira zvirevo zvematongerwo enyika vabudise lol
Ini ndaizoda kuti nyika yangu ipe mahara makomputa evana vese uye kunyangwe neine debian linux distro, asi vamwe vanoona zvese zvisirizvo.
canaima haigone kuve yakaipa sezvo yakavakirwa pana debian rinova dombo.
Saiye muVenzuelia ndinoti zvirokwazvo chirongwa cheCanaima chaive chirongwa chakanaka chakashatiswa nenzvimbo dzezvematongerwo enyika uye chakazopedzisira chave kopi yakashata yemapakeji aripo uye mafomu ayo logo nemazita zvakachinjwa uye humiriri hwakapihwa ivo pachavo, basa chairo raiitwa namai distro. Saka ini handizvitsigire kwete nekuti handisi kufara nezvedanho rehurumende raive rakanaka, asi nekuda kwekutsvedza kwarinopa kumushandisi wekupedzisira uye rinomugonesa pakupedzisira kuti angatoda kuva neWindows PC pane Linux. Pane mumwe munhu akaedza canaima, ini ndakaona kuti ivo vaifunga kuti Linux ndiyo yakashata uye yechinyakare. Nekuti ngatizvitarisei, Kanaima yapera yechinyakare uye isingatsigirwe software, kunyangwe mushandisi ane ruzivo anopedzisira adyiswa nekuisa chero imwe Linux distro, zvirinani ndizvo zvandakaita. Nenzira iyo boka revapurogiramu vakawana mamwe magwaro kana chimwe chinhu chakadai kumhanya kumashure kuti vasore vanhu mumazuva avo ekutanga. Nekudaro, ini handizoshamiswa dai vaivapo, mushure mezvose, vanozvipa vanhu vane zero linux ruzivo.
Iye zvino vangadai vakaita zvakafanana nedzimwe nyika, vagadzire distro yenyika vasingarambe kushandiswa kwesoftware yatogadzirwa, pachinzvimbo chekutorera kunyora kwayo. Semunhu wemutemo ndinoona zvichisiririsa uye zvisina hunhu. ndosaka ini ndisingatsigire Kanaima zvachose.
PS Nezve izvo isu tinofanirwa kutenda hurumende nekushandisa kwemahara software, ndinofunga kuti isu hatifanire kuvatenda nekuda kweizvozvo. Pakange paine vanhu vakaringana vaive vatanga kushandisa linux vega (ini ndaisanganisira, uyezve debian, fedora, misangano yehunhu yanga ichitobatwa zvisati zvaitika). Izvo zvakaitwa nehurumende kwaive kune imwe nhanho kumhanyisa mashandisiro ayo nekuti zvakajekesa kune wese munhu kuti kune OS yakawanda kupfuura Windows. Saka izvo hazvifanirwe kuwedzeredzwa futi, ndine chokwadi chekuti yemahara software ingadai yakaparadzira zvakafanana ne kana pasina rubatsiro rwehurumende nekuti mabhenefiti ainayo anoonekwa
kubvumirana zvachose ..
Ini ndinogovana iwo maonero ...
Roger Waters akadaro
Ndiri pamabhiza ..
Pindura Roger Waters
Ini ndinofunga chirongwa chakanakisa, kana chiri chezvematongerwo enyika kana kwete, ini handizive, asi munenge pasina nyika ivo vanopa makomputa neLinux uye yemahara kubatana kune vese vadzidzi uye icho chinhu chinofanira kukosheswa,
Mazhinji mafomati ane windows aya makomputa aive nezvinangwa zvekudzidzisa uye anoashandisa kutamba, izvo zviri kuzvinyengera
Andy Ramirez akadaro
Ini ndakaisa yekutanga OS kune canaima uye inoenda zvakanaka, uye kune imwe ini ndinoisa Kubuntu 14.04 pasina kuita zvakawanda kwazviri uye zvese zvinomhanya zvakakwana, ingoisa pasina kumisikidza uye vanonyatso shanda chaizvo, iyo canaima repositori maseva haashande nekuda kwe chokwadi chekuti internet kubva pano mu venezuela ndeye *** saka, vanogara vari pasi ndizvo zvinoitika.
Pindura kuna Andy Ramirez
Hahahahahahahahaha ... ndinoreva kuti wabvisa Canaima?
Ndichadzoka ndosiya imwezve ...
Zvinoenderana neiyo FSF iyi GNU / Linux Distribution:
«Mumenyu huru yeKanaima pane sarudzo ye« kuisa isina-yemahara software »kuburikidza neayo ese asiri mahara madhiraivhu [« madhiraivha]] akaisirwa, kunyangwe ayo asina basa. Kugovera kwacho kunosanganisirawo mabhurogi eLinux, iyo kernel, uye inokukoka iwe kuti uise zvinoshandiswa zvisiri zvemahara, zvinosanganisira Flash Player
Saka FSF haitsigire se100% uye inorasa mashandisiro ayo kune vashandisi vanotsigira pfungwa dzaVaStallman
Ubuntu uye kunyange Debian havazi 100% yemahara kana uye ini handione chero munhu achitsoropodza. kana ndosaka paine chete Trisquel uye ini handizive kuti ndeipi imwe iri 100% yemahara.
Danilo anderson akadaro
Kana isu tiri kutaura nezve software pano, kutaura kuti Kanaima yakanaka, nekuti ivo vanopa makomputa kuvana, hazviite chero pfungwa. Dai makomputa asina kupihwa zvaizove zvakanaka software? Ngatifungei zvinotaurwa nevakawanda pano (kusanganisira ini kubvira ndiri kubva kuVenezuela) izvo zvinogadziridza uye zvinotsigira hazvina maturo, izvo zvaita kuti GNU / Linux mutungamiri mukuchengeteka. Yakave zvakare software inosemwa nevana, isingakwanise kuvandudza uye kuigadzirisa kune inochinja nyika yehunyanzvi yanhasi.
Zvino tiri kutaura sei kwete nezve software chete asiwo nezvekuti "yakanaka danho iri"
Zvinoseka kuona zvimwe zvirevo uko vanoti vana vanodzivirira shanduko kuWindows. Kutanga, kana vachinge vakupa iyo Kanaima, mazhinji masangano haabvunze zvekare, nekudaro hapana simba pamusoro peiyo software inoshandiswa. Chechipiri, vana vamwe chete vanobva vangoichinjira kuWindows kuti vakwanise kutamba Counter Strike uye nemhando dzayo dzemitambo, izvo zvinorambidzwa zvinorambidzwa nenyika inodzivirira yeVenzuelan. Chechitatu, kutakura komputa muhombodo kune njodzi munyika yechipiri ine mhirizhonga muAmerican continent, saka zvinonetsa kuti software ishandiswe kudzora zviitiko mukirasi, sezvo vadzidzisi pachavo vachiziva mamiriro ekutakura avo mhando dzematurusi uye ivo vanonzwisisa kuti sei zvisina kuitwa.
Kanaima ndiyo imwezve inonamira ine shanduko yezita kuti ipiwe humiriri. Mushandisi weblog rino anogona kuzvigamuchira uye asingaone dambudziko nazvo sezvo iri yemahara software. Iri harisi iro dambudziko kwandiri. Dambudziko ndere paunoona iyo hurumende isingatombo taure, uye haizoti izvozvo uye ichiti kukanganisa uku sekubudirira kwe "chimurenga", kana chiri chinhu chiri kuitwa nenyika chero ipi neInternet (inova nzira yatinayo yechipiri. yakaipisisa Internet pasi). kondinendi).
Nyika haigone kutora iko kusimudzira yemahara software nemari yeruzhinji, iyo munyika senge yedu (iri munyatwa) inofanirwa kuendeswa kune chaicho uye chaicho chinodiwa. Kunyangwe sekuda kwatinoita sevadziviriri vemahara software, mari iyoyo haina kupihwa kuhomwe yezvemari nepfungwa yekusimudzira bazi iri rehunyanzvi sedonzvo guru. Kwete zvakati wandei kutsigira bato rezvematongerwo enyika asi zvakadaro zvinoitwa zvinetswa.
Chekupedzisira, ini ndinosiya chiyeuchidzo kushamwari dzinoda kuti iyi mhando yechiyero ishandiswe munyika dzadzo (Kanaimitas + Kanaimas). Ichokwadi ndechekuti ipfungwa yakanaka kwazvo kana ikashandiswa mushe, ndeyekupa chishandiso kuvhura nyika yezvingaitika kuburikidza neruzivo. Pfungwa inodaidzira kudzidza uye kuva nezviri kutaurwa kune vanogadzira software uye vezvemhizha vezvemabhizimusi pasi rese.
Nekudaro, huwandu hweaya matanho ndiyo honzeri yemaitiro asina nyadzi akagadzirwa munyika yangu. Paunojaira nzanga iyo nyika inofanirwa kupa zvese, kubva kuchikafu chako, imba yako, muhoro wako, yako "dzidzo", iyo nzanga haina chero rudzi rwekurudziro yekuvandudza. Iwe unofanirwa kungomirira kuti zvaunoda zvigadziriswe pasina chero chishuwo chekufambira mberi, kukwikwidza, kuziva kuti vanogona kuve nani (ngatisiyei zvinokurudzira zvemari). Mazuva ese ini ndinozviona izvo munyika yangu uye sezvo ini ndatozviziva pakutanga, ndinogona kuzviona ndiri kure mune dzimwe nyika.
Sangano rinoshandisa zvisina kufanira vatengi varo kana "vanovimba" rakasiyana sei nedunhu richidaro?
Linuxero hausi kushatisa iyo blog kana iwe uchibvumira iyi mhando yekutaura, pachinzvimbo vazhinji seni vanokoshesa mukana wekutaura uye kujekesa kuti iyi distro inongova chimwe chinhu chimwe muzvinyorwa zvematongerwo enyika zvehurumende. Kusatendera idzi mafoni ekucherechedza kubvumidza yemahara software kuti izviratidze se "kubudirira" kune pfungwa dzakapfuura zvakaratidza, havatenderi vanhu kuti vabudirire. Sezvavanotaura: Zvakaipa zvinokunda kana zvakanaka zvisingaite chinhu.
Pindura Danilo Anderson
Musangano we6th: Mahara Software uye Bhizinesi